जग्गाको मूल्य ह्वात्तै घट्ने हल्ला ! के हो वास्तविकता ?
काठमाडौँ । माघ १ गतेदेखि बैंकहरुमा गो–एएमएल प्रणाली लागू भएपछि जग्गाको मूल्य ह्वात्तै घट्ने हल्ला चलाइएको छ । कालोधनले जग्गाकारोबार गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेहरुका लागि सरकारले लगाएको नयाँ नियमले जग्गाको मूल्य घट्ने नभई धेरै मूल्यमा जग्गा बेचेपनि सरकारी मूल्याङ्कन अनुसारको मात्रै राजश्व तिर्ने चलनको भने अन्त्य हुने देखिएको छ ।
नयाँ नियम अनुसार चेक वा नगद जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा विवरण खुलाउनुपर्ने र जग्गाको किनबेच भएको वास्तविक मूल्य देखाउनुपर्ने भएपछि सरकारी राजश्व बढ्ने देखिएको हो । यसअघि धेरै मूल्यमा जग्गा बेचेपनि सरकारी मूल्याङ्कन अनुसारको मात्रै राजश्व तिर्ने चलन थियो । अब भने त्यसरी सरकारलाई ठग्न अलि कठिन हुने देखिएको छ ।
जग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको बेला मूल्य घट्ने हल्लाले दु:ख गरेर केही पैसा घर घडेरीमा लगानी गरेका निम्न बर्गिय मानिसहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। यस्तो हल्लाले जग्गाकारोबारी हरुले अनुचित फाइदा उठाउने र सोझा सिधा जनता भ्रममा पर्ने सम्भावना बढ्छ ।